Masangano Akazvimirira Anoti Hurumende Ngaigadzirise Zvinhu Kwa Marange
Chivabvu 14, 2010
Masangano akazvimirira oga nevanorwira kodzero dzevanhu vari kukurudzira hurumende yemubatanidzwa igadzirise zvinhu kuminda yemangoda kwa Marange uko vanoti zvinhu hazvisati zvamira zvakanaka.
Masangano aya ari kuti hurumende inofanira kuburitsa pachena kuti zvii zviri kuitika kwaMarange uko kuri kunzi kwava neimwe kambani itsva yeku china inonzi Anjin iri kucherawo mangoda aya. Hurumende hapana zvairi kuburitsa pachena nezvenyaya iyi.
Va Dewa Mavhinga vanoshanda nesangano reHuman Rights Watch. Va Mavhinga vati hurumende inofanira kutaura zviri pachena kuti vanhu vazive zviri kuitikwa kwaMarange uye kuti zvichabatsira sei nyika nevanhu vayo.
Zvichakadaro zviuru nezviuru zvevashandi vemumigodhi inochera goridhe zvakatanga kuramwa mabasa neChina zvichinyunyuta nemari yazviri kutambira. Varidzi vemigodhoi vanoti kuramwa mabasa uku kwapa kuti varasikirwe nemari yakawanda zvikuru. Mutungamiri wesangano revashandi re Associated Mine Workers Union of Zimbabwe VaTinago Ruzive vanoti vashandi vakawanda vatambira kurudziro yavo yekuramwa mabasa.
Zvichakadaro mumiriri weChiredzi West mudare reramende uye vari mukomiti yezvicherwa VaMoses Mare vatenda kuti vashandi vemumigodhi vari kutambura zvakananya. Komiti yeparamende iyi neChishanu yakashanya kumugodhi uri kuZvishavane. VaMare vanoti vashandi vari kunonga svosve nemuromo nekutambiriswa mari shoma.